'चाडवाडका ग्याजेट्स' झुक्काउला है | मेरो कलम
‘चाडवाडका ग्याजेट्स’ झुक्काउला है
Nepali September 26, 2012
नेपाली घरआगँनमा पर्वहरुको सिलसिला जारी छ । नागमञ्चमीबाट सुरु भएको जनैपुर्णिमा पर्वको लहर ईद उल फित्र,तीज हुदै अव दशै तिहार र छठ नजिकिदैछ । चाडपर्वको यो माहोलसगैँ धेरैले आफुलाई आवश्यक आईटी सामानहरु दशैतिहारमा नै लिने भनेर योजना बनाएका हुन्छन् । घर वाहिर हुनेहरुले चाडवाड मनाउन जादाँ घरमा आफन्त तथा साथीभाईलाई ल्यापटप,क्यामरा,ट्याव्लेट,मोवाईल लगायतका ग्याजेट्सहरु लगिदिने त परम्परा नै बनिसकेको छ । त्यसैले आईटी उत्पादनको बजार गर्माएको छ । चाडवर्प लागेसगै बजारमा अहिल्य धेरै सस्ता आईटी उत्पादन निस्किएका छन् । साना साना पसलहरुमा पनी सस्तोमा भन्दै ग्याजेट्स बेच्न राखिएको हुन्छ । अनि दशैतिहारको उपलक्ष्यमा ५० प्रतिशतसम्मको छुटको अफर दिईएको देख्न पाउछौ ।
गदि तपाईपनी पर्वको अवसर पारेर आईटी उत्पादन खरिद गर्ने सोचमा हुनहुन्छ भने होस गर्नुस् । सस्तो भनेर बेच्न राखिएको ती उत्पादन नक्कली र कमसल पनी हुन सक्छन् । भारी छुटको फन्दामा पर्दा सस्ता ग्याजेट्सले तपाईलाई झुक्काउँलान् । अरु समयमा ५० हजार रुपैयाँ पर्ने ल्यापटप, चाडवाडको अवसरमा ३०÷३५ हजारमै किन्न पाईन्छ । त्यस्ता सस्तो अफरको आशाले पनी धेरैले चाडवाडको प्रतिक्षा गरिरहेका हुन्छन् । विश्वस्तरका उत्कृष्ठ व्राण्डका सामानहरुपनी धेरै अन्तरमा पाएपछि खुसी लाग्नु त स्वभाविकै हो । धेरै सस्तोमा पाईयो भनेर लिएको सामानहरु त्यहि चाडवाडसम्म मात्रै सिमित पनी हुनसक्छ । कम्पनीले तोकेको मुल्य भन्दा धेरै तल झरेर विक्रि गरिएका जस्तोसुकै स्तरिय व्राण्डको उत्पादनहरु राम्रा र स्तरिय हुदैनन । त्यस्ता सामानहरु हेर्दा राम्रो लागेपनी किफायती र गुणस्तरका हिसावले कमसलनै हुन्छन् । दशैतिहारको समयमा धेरै विक्रि हुने ग्याजेट्स भनेको ल्यापटप,क्यामरा,ट्याव्लेट,मोवाईल नै हो । यी उत्पादनले चाडवाडमा बजार तताईरहेको हुन्छ । यस्तै मौका छोपी कालोबजारी गर्नेहरुले चामलमा ढुङ्गा मिसाएर विक्रि गरेजस्तै थाहा नै नपाउने गरी नक्कली उत्पादन विक्रि गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विषयमा राम्ररी वुझ्न नसक्दा सस्तो वेसाएको सामानले पखाला लाग्न पनी सक्छ । फेरी यो भनिएको हैनकि धेरै पैसा लगानी गरेका सामानहरु मात्र राम्रो हुन्छन् । क्षमता र गुणस्तरियता वुझ्न आवश्यक छ ।
विश्वव्राण्डका लोगो भएका सामानहरु पनी कसरी नक्कली हुनसक्छन् त ? हो यस्ता विषयमा ध्यान जान आवश्यक छ । ल्यापटपकै कुरा गर्दापनी कम्पनीले विक्रि गर्ने मुल्यमा केहि सयदेखी हजारसम्म सस्तोमा पाउनु सामान्य नै हो । तर चाडवाडको अवसरमा भन्दै धेरै नै सस्तोमा सामानहरु दिइरहेको पाउनुभयो भने त्यसमा केहि न केहि गडवड छ भनेर वुझ्दा हुन्छ । ल्यापटपमा सामान्यत सक्कली व्याट्री निकालेर नक्कली व्याट्री,चार्जर राखेको हुनसक्छन् । न्युन क्षमताको हार्डडिस्क प्रयोग भएको हुनसक्छ भने ,ग्राफिक्स,र्याम जस्ता प्रोसेसर निम्न स्तरका राखिएको हुनसक्छन् । त्यस्तै आवश्यक सफ्टवेयरहरु नहालिएको हुनसक्छ । ल्यापटप व्याग,एक्ट्रा चार्जर,माउस,एन्टिभाईरस,हेटसेट, स्त्रिन कभर जस्ता आवश्यक समानहरु नदिएको हुनसक्छ । हो यसैकारण पनी स्वभाविकरुपमा यस्ता उत्पादनहरु सस्तो हुन जान्छ । अव तपाई आफै भन्नसक्नुहुन्छ यति धेरै सामान नपाएपछि सस्तोको के अर्थ भयो र ? साथै न्युन क्षमता भएका पार्ट पुर्जाले गुणस्तिरिय काम पनी गरिरहेका हुदैनन । आकर्षक तर कम गुणस्तरका सामानहरु किन्नुभयो भने वच्चाले खेल्ने खलौना हुनपुग्छ र लामो समय टिक्दैन । कतिपयले क्यामरा खरिद गर्छन तर क्यामरासगँ अरु के के पाउनुपर्ने हो त्यतिातिर ध्याननै दिदैनन् । एक्ट्रा व्याट्री, एक्ट्रा मेमोरी क्यामरा व्याग,झुन्डाउने डोरी लगायतका सामानहरु पाएको छकिछैन जस्ता विषयमा ध्यान नदिदा सस्तो किनेकोले केहि अर्थ राखिरहेको हुदैन । भ्रम फैलाएर व्यवसाय गर्नेहरुदेखी सदैव टाढा रहन आवश्यक छ । चलेका व्राण्डेड नाम, तर कम गुणस्तरका मोवाईल विक्रिले पनी नेपाली बजार तताएको छ । यस्ता मोवाईको मुख्य समस्या भनेकै न्युन क्षमताको व्याट्री हो । साथै त्यस्ता मोवाईलमा,अडियो,भिडियो,क्यामरा,ईन्टरनेट,प्रोग्राम सपोर्ट जस्ता विषयमा धेरै नै समस्या देखिन्छ । नेपाली बजारमा दैनिकजसो नयाँ नयाँ ट्याव्लेट बजारमा आईरहेका छन्् । थोरैका नाम छन् अर्थात केहि मात्रै ब्राण्डेड छन् धेरैजसो नेपालमै आएर नामाकरण हुन्छन् । जस्तो नेपालको एविसी कम्पनीले विदेशवाट ट््याव्लेट झिकाउछ र त्यो ट्याव्लेको नामै एविसी हुन्छ, धेरै ट्याव्लेटको न्वारन नेपाली बजारमै भईरहेको छ । यस्ता सामानहरु खरिद गर्दा धेरै होशियारी अपनाउन आवश्यक छ । अझ नेपालमा लामो समयदेखी आईटीको क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेका कम्पनीहरु त्यस्ता उत्पादन विक्रि गर्ने कम्पनीले नेपाल सरकार तथा सम्वन्धीत सस्थावाट स्विकृती लिएको छकि छैन जस्ता विषयमा पनी उपभोक्ताले वुझेर कारोवार गर्न आवश्यक रहेको वताउछन् । कम्पनीहरु भन्छन् आज सामान विक्रि गर्ने व्यक्ति भोली हराउन सक्छ, त्यसो भएमा वारेण्टी÷ग्यारेण्टी तथा एक्सचेन्जका नियमहरु लागु हुन पाउदैन र उपभोक्ता ठगिन्छन् ।
कुनैपनी आईटीका प्रोडक्ट खरिद गर्दा नेपालस्थित आधिकारीक कम्पनीमा फोन गरेर वुझ्न आवश्यक रहेको नेपालको पुरानो आईटी कम्पनी मर्कन्टाईलका सेल्स विभाग म्यानेजर राज महर्जन वताउछन् । महर्जन भन्छन् प्रयोग गर्दै आएका व्यक्तिको राय सल्लाह तथा अनुभवको आधारमा पनी खरिद गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ईन्टरनेटमा हेरेर कस्तो फिचर भएको उत्पादन आफुलाई चाहिएको हो सो विषयमा प्रश्ट भएर सर्भिस सेन्टर तथा कम्पनीमा सम्पर्क गर्दा राम्रो हुने महर्जनको भनाई छ । आईटी प्रोडक्ट नेपाल भित्राउदै आएको अर्को आईटी कम्पनी एसएचटीसी ईन्टरनेशनल नेपालका मार्केटिङ म्यानेजर डिवी श्रेष्ठपनी कम्पनीले तोकेको मुल्यभन्दा थोरवहुत फरक परेपनी आकाश पतालको फरक नुहने वताउछन् । श्रेष्ठ भन्छन् नेपाली बजारमा नाम चलेका तर धेरै सस्तै आईटी प्रोडक्ट पाईन्छ भन्ने सुनेको छु । त्यस्ता सामानवाट भने सदैव जोगिन आवश्यक छ । खरिद गर्न आटिएको सामान गुणस्तरीय छकि छैन , वारेण्टी ग्यारेण्ठी के छ सो विषयमा राम्रोसगँ वुझ्न र विशेष ल्यापटप खरिद गर्दा त पार्टपुर्जा सवैमा एउटै सिरियल नम्वर छकि छैन सो विषयमा जानकार हुन आवश्यक रहेको वताउछन् । श्रेष्ठले भनेजस्तै हामीलाई आवश्यक भएरै ग्याजेट्सहरु खरिद गरिरहेका हुन्छौ , एकपटक लिएपछि केहि वर्षसम्म काम लिन गरोस् भन्ने अपेच्छा हुन्छनै , छोटो समयमै फेरिरहन सक्ने सामर्थ हामीमा नहुन पनी सक्छ । त्यसैले यस्ता सामाग्रीहरु छनोट गर्दा आधिकारीक कम्पनी तथा सर्भिस सेन्टरहरुमा राम्ररी वुझेर मात्र लगानी गर्न आवश्यक छ । अहिल्यको डिजिटल समयमा कुनैपनी कुरा लुकेका हुदैनन र लुकाउन सकिदैन । कुन व्राण्डको मुल्य कति पर्छ,के कस्ता फिचर छन् भन्ने जानकारी इन्टरनेटमा सजिलै पाउन सक्छौ । आधिकारीक कम्पनीसगँ हामीले कारोवार गर्दा अर्को एउटा फाईदा भनेको तुरुन्तै मर्मत गर्नुपरो अथवा पार्टपुर्जा विदेशवाट मगाउनुपरो भनेपनी सजिलै पहुँच पुग्दछ र हामी आफ्नो ग्याजेट्स निरन्तर चलाउन पाउछौ ।
एलजीको आप्टिमस-जीले बोल्योकी खिँचिहाल्छ फोटो
“नेपालको आवश्यकता भन्दा पहिले जन्मिए”
Nepali August 29, 2012
Nepali January 21, 2013
Dipak Thapa September 26, 2012 Log in to Reply
Shanti Bikram Gautam September 27, 2012 Log in to Reply
welcome boss 🙂